Shirkii Kismaayo uga socday maamul goboleedyada oo fashil ku dhamaadey - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Shirkii Kismaayo uga socday maamul goboleedyada oo fashil ku dhamaadey
Shirkii uga socday maamul goboleedyada Kismaayo ayaa fashil ku soo dhamaadey. War ay soo saareen ayaan waxba kaga duwanayn kuwii hore u jirey sida in dalka lagu wado goboleysi qabiil ku dhisan iyo inay agboodaan dawlada.
Shanta masuul ee goobta iskugu tagey ayaa intuba ku fashilmey inay wax ka bedelaan nolosha deegaanada ay sheganayaan inay maamulaan, inay wax ka sii ridaan mooyee.
Qoraalka ay soo saareen ayaa waxa ku jira mar haddii ayna waxba ku lahayn siysaasda arimaha dibedda ee dalka inay la sii hadli karin dawlada dhexe, hadalkaas oo muujinaya cida sida saxda uga dambeysa.
Horjoogeyaasha qaar ayaa waxa ku soo fool leh doorasho reereed waana ta walwalka ku abuurtey. Intooda badan ayaa raba in sadbursi la siiyo.
Somalida badankeeda ayaan waxba ka qaban karin maadaama qabiill loo kala jajabiyay halka dhinaca kalana argagixiso weerar maskaxeed ku hayso.
Horjoogeyaashan ayaan midkoodna u hogaansan sharciga dawladnimada ayadoo qaarkood mar hore xilka laga tuurey sida Xaaf, ayadoo dhinaca kalana Shariif Xasan laga keenay mooshin.
Shirkan ayay is lahaayeen eeda saara dawlada dhexe waxase xaqiiqa in dadka Somaliyeed la siri karin laguna siri karin federaal iyo dawlad la garab ordo ee danaynayaan kaliya in noloshooda wax laga bedelo.
faaladii C/llaahi Warmooge